२५ वर्षदेखिका अस्थायी शिक्षक अब स्थायी, यही वर्ष लाइसेन्स | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
२५ वर्षदेखिका अस्थायी शिक्षक अब स्थायी, यही वर्ष लाइसेन्स
प्रकाशित मिति १ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०७:४६ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । अढाई दशकभन्दा बढी अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षक स्थायी बन्ने भएका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले तीनै तहमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न सुरु गरेको छ। २०५६ सालमा स्थापना भएयता आयोगले यसपालि एकै वर्ष करिब २७ हजार शिक्षक पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तीनवटै तहका गरी करिब १३ हजार अस्थायीका साथै १२ हजार ७ सय ३९ पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुँदै छन्। पदपूर्ति प्रक्रियालाई तहगत आधारमा २०४९ सालअघि, ०६१ सालअघि र २०७२ सालअघि गरी तीन फरक समूहमा अस्थायीलाई प्रतिस्पर्धा गराइएको छ।
हालै मात्र प्रकाशित निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक परीक्षामा १ हजार ९ सय ९ जना उत्तीर्ण भएका छन्। तीमध्ये ५१ जना २०४९ सालअघि र ८ सय ५९ जना ०६१ साल अघिदेखि अस्थायी छन्। उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरू नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, गणित विज्ञान र कम्प्युटर विषयका हुन्। सबैभन्दा धेरै अस्थायी शिक्षक प्राथमिक तहमा छन् । प्राथमिक र माध्यमिक तहको नतिजा प्रकाशन क्रममा छ। ‘आयोगले विभिन्न तह, खण्ड र विषयगत गरी दुई सयभन्दा बढी विज्ञापनको पदपूर्ति गर्दै छ,’ आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसी थपलियाले भने, ‘मावि र प्राविको नतिजा प्रकाशन गर्न अझै केही समय लाग्छ।’
शिक्षक सेवा आयोगले यही आर्थिक वर्षभित्र अध्यापन अनुमतिपत्र (शिक्षक लाइसेन्स) को परीक्षा लिएर नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। प्राविधिक कारणले २०६८ सालदेखि रोकिएको प्राथमिक तहको शिक्षक लाइसेन्ससमेत खुलाउने आयोगले जनाएको छ। शिक्षा ऐनमा विद्यालयलाई आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तह मात्र कायम गरिएपछि प्राथमिक शिक्षकका निम्ति लाइसेन्स रोकिएको थियो। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
चार सांसद् जसले ऐतिहासिक शपथग्रहण समारोहमा भाग लिन पाँउँदैनन्
संघीय संसद् र राष्ट्रियसभाका सांसदहरु आज हुने शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थितिका लागि ब्यग्र प्रतीक्षामा छन् । दिउँसो चार बजे…
कांग्रेसमा पराधिकारी विवाद बल्झिँदै, सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच विवाद !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा पदाधिकारी संख्या बढाउने बिषयलाई लिएर सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच विवाद सुरु भएको…
प्रधानमन्त्री देउवाकोे बेवास्ताले दशवर्षे कर्णाली विकास योजना अलपत्र, बैठक नबोलाउँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेन !
काठमाडौं । कर्णाली विकास आयोगले तयार गरेको दशवर्षे विकास योजना अलपत्र परेको…
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मालीले नियुक्तिकै दिनदेखि मितव्ययी बन्न र भ्रष्टाचार नगर्न आफ्ना मन्त्रलीलाई झकझक्यारहेका छन्। तर १० महिने…
काठमाडाैं । चार वर्ष अघि २०७२ वैशाख १२ गोरखा जिल्लाको बारपाक केन्द्र बनाए गएको शक्तिशाली भूकम्पको त्रास कायमै रहँदा…
सेक्स गर्दा किन आवाज निकाल्छन् महिला ? 275 views
नेपाली सेनाका जर्नेल, कर्नेलका घरघरबाट ‘अर्दली’हरु फिर्ता गर्न निर्देशन 163 views